Madaxda maamuladda Soomaaliya oo wada gaarey Dhuusamareeb
DHUUSAMAREEB, Galmudug – Madaxweyneyaasha maamuladda Soomaaliya ayaa wada gaarey caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb, halkaas oo uu kaga furmayo shir ay uga arrin-sanayaan xaalada siyaasadeed ee dalka.
Axmed Cabdi Kaariye [Qoor-qoor], hogaamiyaha dowlad goboleedka shirka martigelinaya ee Galmudug, ayaa si diiran mid-mid ugu soo dhaweeyay wafuuda madaxda ay horkacayaan, iyagoo si kooban ula hadlay saxaafada.
Madaxda oo ka gaabsaday in ay kasii horudhacaan ajendaha shirka ayaa rajeeyay in kulanka uu noqdo mid ay kasoo naxaan "natiijo aad u fiican".
Warar horudhac ah ayaa tilmaamaya in ajendaha shirka ay kamid yihiin arimaha hor-tabinta u leh qaranka gaar ahaan doorashooyinka 2020-ka.
Kulankaan ayaa ka dhashay wadahadal dhanka Internet-ka ah oo madaxdu yeelatay ka gedaal markii uu fashilmay Shirkii Amniga Qaranka oo madaxweyne Farmaajo u muddeeyay in uu Muqdisho ka dhaco 5-7 bishan July.
Ammaanka Dhuusamareeb ayaa aad loo adkeeyay, waxaana la sameeyay baro-kontaroolo cusub oo ku yaala halka la filayo in uu shirka ka dhaco.
Shirkaan oo noqonaya kii ugu horeeyay oo noociisa oo kale ah oo madaxda maamuladdu yeeshan muddo kadib ayaa la rajeynayaa in ay kasoo baxaan qodobo xal u noqonaya "xaalada cakiran ee waddanka uu haatan ku jiro".
Soomaliya 25.08.2019. 15:23
Habka uu Farmaajo "u khaarijiyey" wadahadalada arrimaha doorashada
Soomaliya 16.08.2020. 13:00
Nuxurka khudbadihii madaxda DF iyo maamulada ee shirka Dhuusamareeb
Soomaliya 22.07.2020. 22:15